Itoobiyaan safaf ugu jira safaaradda Ruushka si loogu qoro ciidannimo
Qaar ka mida ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine
ADDIS ABABA - Boqollaal qof oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa inay toddobaadkii u dambeeyey safnaayeen bannaanka safaaradda Ruushka ee magaalada Addis Ababa iyaga oo rajaynaya in safaaraddu ay u qorato inay ka barbar dagaallamaan ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine, hase ahaatee safaaradda Ruushka ee Addis ababa ayaa meesha ka saartay sheegashada ah inay qoranayso dagaalyahanno ajnebi ah oo ciidamadeeda ka barbar dagaalama, waxaana safaaraddu ay sheegtay in muwaadiniinta Itoobiyaanka ahi inay safaaradda u yimaadeen inay u muujiyaan taageero iyo garab is-taag.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in dadkan oo safaf kaga jiray bannaanka safaaraddu inaanay gudaha gelin, hase ahaatee qaar ka mida shaqaaluhu inay u soo baxayeen dadka debedda joogay, ka dibna ay ka qaadayeen waraaqo iyo documents.
Dadka barxadda hore ee safaaradda Ruushka ku sugnaa waxaa ka mid ahaa Feleke Gebrekidan oo leh khibrad ciidan isaga oo tobanaan sano ka soo tirsanaa ciidamada dalka Ethiopia. Wuxuu sheegay in dadka uu u malaynayo in la shaqaalaynayo inay yihiin dad hore uga soo tirsanaa ciidamada dalka Ethiopia, oo aan haatan wax shaqo ah haysan. Feleke ayaa sheegay in markii uu warkaas maqlay inuu waraaqihiisa soo qaatay si uu uga mid noqdo dadka la qorayo. Feleke ayaa muddo saddex maalmood ah ku sugnaa banaanka safaaradda isaga oo aanay u suurogelin inuu gudaha gaadho.
Waxaa jira dad badan oo Ethiopian ah oo aan ku faraxsanayn arrintan sida Tewodros Sime oo deris la ah safaaradda Ruushka ee Addis Ababa, waxayna arrintan ku tilmaantay inay tahay arrin khalad ah.
Maria Chernukhina, oo ah u qaybsanaha dhinaca saxaafadda ee safaaradda Ruushka ee Addis Ababa, oo la hadashay VOA, ayaa qiratay in qaar ka mid ah dadka safka ku jira ay wataan dukumentiyo, balse waxay sheegtay in tani ay ka tarjumayso rabitaankooda iyo rajadooda. Waxay sheegtay in safaaradda Ruushku aanay dadka u shaqaalaynin ujeedo kasta, maadaama aanay arrintaasi ku jirin masuuliyadaha xafiiskooda diblomaasiyadeed”
Maria ayaa hadalkeeda sii raacisay in tan iyo markii uu dagaalku billowday in Itoobiyaanku ay soo wacayeen oo ay emailo ugu soo diri jireen safaaradda si ay u muujiyaan inay garab-taagan yihiin Ruushka.
xidhiidho ay la sameysay VOA, safaaradda Ukraine ee Addis Ababa ayaa diiday inay wax faallo ah ka bixiso arrintan, sidoo kale Wasaaradda Arrimaha Debedda ee Ethiopia ayaan Iyana ka jawaabin farrimo ay u dirtay VOA.